Android Q inopinda beta chikamu, ichave yakachengeteka kupfuura nakare kose | Linux Vakapindwa muropa
Android Q inopisa. Google yakaburitsa yekutanga beta vhezheni yeApple Q kana Android 10, inotevera vhezheni yeanonyanya kufarirwa mobile operating system papasi. Ichazotarisa pane chimwe chinhu chinoshungurudza vashandisi vazhinji, zvakanyanya zvekuti ndinoziva kuti vamwe havashandisi Android pazviri: kuchengetedzeka kwavo uye kuvanzika. Asi avo vanofarira zvimwe zvekuratidzira kana zvinonzwisisika zvitsva havavhunduke, nekuti zvinosanganisirawo zvimwe zvitsva, pakati pazvo izvo zvine izvo zvinoita kunge remangwana remafoni nhare.
Samsung, pakati pevamwe, yatove vapa kupeta skrini Uye ichi chichava chimwe chezvinhu zvitsva izvo Google ichasanganisira muApple Q. Uye ndezvekuti Android iri mumhando dzese dzemidziyo uye chinotevera chinotevera chinoita kunge nhare mbozha idzo, kana dzikavhurwa, dzichava mini piritsi. Kutaura nezvezviratidzowo, iyo inotevera vhezheni yeApple ichasanganisirawo rutsigiro rwemaganho ekuratidzira, ayo anotaridzika kunge ramangwana. Iyo Korean firm yakatotanga kuvhura chigunwe kuverenga pasi pechidzitiro, chinova chirevo chechinangwa mune izvi.
Android Q inosanganisira kutsigira kwe5G kubatana
Chimwe chinhu chitsva chichava icho Android 10 ichasanganisira rutsigiro rwe5G kubatana. Zviripachena kuti pachine nzira refu yekufamba kuti tese tigone kunakidzwa nekumhanya kwechizvarwa chinotevera chemasaiti, asi ichokwadi zvakare kuti zviri nani kugadzirira pasi kuitira kuti kana nguva yacho yasvika, ivo vasiri kubatwa.
Iyo rondedzero yezvakakurumbira zvitsva zvingaite seizvi:
Kuvanzika uye chengetedzo kugadzirisa.
Kugadziridzwa kwekupeta mafoni (muV).
Tsigiro yekupeta skrini.
Vhidhiyo nyowani uye odhiyo macodec: AV1 yevhidhiyo uye Opus yeModhiyo.
Borderless kuratidza rutsigiro.
Tsigiro yeVulkan 11 yemitambo.
Nyowani APIs yekubatanidza.
Pakati pezvinyorwa zvekuchengetedza zvataurwa tichava nazvo kumwe kutonga pamusoro penzvimbo mvumo mune zvinoshandiswa, chimwe chinhu senge chave kutove muIOS apo patinogona kuzviramba, bvumira icho chete kana iyo app ichimhanya kana nguva dzese. Kune rimwe divi, isu tichavawo neakawanda masimba pamusoro pekupinda panguva yekugovana.
Kutora chikamu uye kukwanisa kushandisa iyi beta unofanirwa kunyorera kwairi kubva Iyi link. Chinhu chega chakakosha kuve nePixel.
Zviripachena kuti izvo zvinosanganisirwa mune urwu runyorwa hazvisi zvese zvinozosanganisirwa neApple Q.Kana pasina zvishamiso, Google ichapa nhau dzinonakidza mune Google I / O ichaitwa mumwedzi mishoma, asi kuverenga kuti ichave yakachengeteka uye nekukurumidza system yatove kunakidza. Chii chaunosuwa muApple icho iwe chaungade kuwona mu Android Q?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Android Q inopinda beta chikamu, ichave yakachengeteka kupfuura nakare kose
Uye kupa mufananidzo weiyo inoshanda system, Nandroid maitiro? Rini? Kugona kuendesa bacap kune SD kadhi kana kune USB tsvimbo kwakanyanya kukosha kupfuura izvo zvese zvitsva zvakaiswa pamwechete. Nekudaro, kana paine dambudziko neiyo smartphone, iwe unodzoreredza sisitimu uye mushonga unoyera haufanirwe kuvaka zvakare zvese zvakare. Imi varume munofungei? Ndakanganisa here?
Space Haven - Iyo Kickstarter Blockbuster Spaceship Simulator